Tiako ny tenako sy ny momba ahy rehetra – Blaogin'i Voniary
Tiava an’Andriamanitra ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ary. Azo fintinina amin’ireo hevitra roa ireo ny didy folon’Andriamanitra. Noho izany, fototra afahanao mitia ny hafa ny FITIAVANAO NY TENANAO ALOHA. Ahoana àry ny itiavako ny tenako manoloana ny fihetsik’ireo manodidina ahy amiko sy ny rafitra apetraky ny fiarahamonina?
Ny avy ety ivelany
Ny endrika ety ivelany no maha-izy azy voalohany indrindra anao: ny BIKA, ny TAREHY, ny VOLO, ny fomba FIANJAIKA, sns. Io anefa no itsaran’ny olona sy ny fiarahamonina anao. Re eny rehetra eny indraindray ny hoe “matavy loatra iny olona iny!”, “ratsy be ny volony!”, “ohatrany mampiomehy koa izany fiakanjony izany!” na ny hafa koa. Ireny teny na fihetsika ataon’ny sasany ireny anefa dia matetika manova ny fandraisanao ny tenanao. Ohatra fotsiny, rehefa voasisika tao an-tsain’ity tovovavy iray ny hoe ny volo ngita dia ratsy dia lasa nanao volo foana izy mba hanafenany izany. Toy izany koa ity tovovavy tso-bolo iray fatra-panara-damaody. “Malaza indray hono izao ny olioly volo e!” dia iny izy manandrana izao shampooing sy produit rehetra izao mba ahatongavany amin’izany. Ny vokatr’ireo roa ireo anefa dia mitovy ihany: lany ny vola, simba ny volo.
Izao anefa no tadidio, nataon’Andriamanitra SAMY HAFA DAHOLO ISIKA. Ary hoy ny fahendrena Malagasy: “aza mitomany randrana manendrika ny hafa”. Tsy misy tsara mihoatra ny mijoro amin’ny MAHA-IZY-AZY, MIAVAKA ary manana ny fianjaika MANOKANA e! Mifaly anaty ery ianao rehefa misy olona akaiky anao na mifanerasera aminao manao hoe “tokana an-tany ianao” na “hafa mihitsy ianao an!”. Tsy ratsy akory ny manara-damaody fa izao kosa e, fantaro izay tianao sy manendrika anao ary mijoroa amin’ny maha-izy-azy anao.
Nanomboka tamin’ny volana mey 2016 dia niseho ampahibemaso tsy manao maquillage, tsy manamboatra volo ilay mpanakanto amerikana malaza, Alicia Keys. Raha nanontaniana izy ny amin’ny antony nanaovany izany dia izao no navaliny: “Ny tena HATSARANA dia ny maha-tokana anao sy ny fahendrenao… Tiako aseho amin’izao tontolo izao hoe indro aho. Tiavo aho na ankahalao fa tsy mampaninona ahy izany.”
Ny ao anatiko
Manan-danja koa ny ao anatinao: ny TOETRA, ny FIHETSEHAM-PO, ny NOFINOFY, ny FIREHANA sy ny hafa. Miseho ety ivelany amin’ny alalan’ny fomba fiaina, ny fihetsika ary ny safidy ireo ary itsaran’ny olona ny maha-izy-azy anao koa. Rehefa afeninao nefa io, na hoe tsy mifanaraka amin’ny ao anatinao ny zavatra iainanao dia miteraka ady anaty izany. Mitondra amin’ny fahakizintinana, fizahozahoana tafahoatra, fialana vonkona amin’ny hafa izany matetika ary mety miafara amin’ny famoizam-po aza.
Ny zava-misy anefa dia misy rafitra, filamatra ary tanjona apetraky ny olona sy ny fiarahamonina. Tsy voatery mifanaraka amin’ilay maha-izy-azy anao io nefa terena arahinao. Hany ka lasa tsy tianao ny tenanao sy izay momba anao rehefa tsy mifanaraka amin’ireo. Ireto misy ohatra mateti-pitranga, tovolahy iray izay manan-talenta amin’ny hosodoko nefa tonga dia sakanan’ny ray aman-dreniny tsotra izao tsy hiangaly izany satria tsy mahavelona io. Tatoato koa dia malaza ny sampam-pianarana paramedical, betsaka ny mpianatra raisina ary omena toky fa ahazo asa avy hatrany. Maro no lasa mirona any: na iza na iza, na inona asa noeritreretiny na inona nofinonfiny. Vokatr’ireo tranga ireo dia lasa feno OLONA DIKA MITOVY be dia be, alevina impito mandifitr’olona ny maha-izy azy ny tsirairay.
Izao anefa, samy nomen’Andriamanitra FANOMEZAM-PAHASOAVANA ny tsirairay ka anjarany no mitrandraka izany. Aza misalasala miresaka amin’izy Nahary anao, anontanio azy hoe: “aiza no iantsoanao ahy? Inona no afahako maneho ny TALENTAKO?”. Ekeo koa fa samy hafa ny tsirairay e! “Harena ny fahasamihafana” hoy ny fitenenana. Hoy I Môssieur Njo “Samy hafa daholo isika rehetra ireto… fa anjaran’ny tsirairay kosa avy eo ny mampiseho toetra sy fihetsika mendrika, manaporofo amin’ny alalan’ny zavatra atao sy apetraka hoe manana ny maha-izy azy anie aho”.
Hamehezako azy dia izao, matokisa ilay Nahary anao, tsy nanaonao foana izy raha nanefy ny endrikao ivelany sy nanome anao toetra mampiavaka anao. Amin’izay dia ho tianao ny tenanao ary ho sahy hijoro amin’ny maha-izy-azy anao ianao.
Alicia Keys, endrika anatiny, endrika ivelany, fahasamihafana, maha-izy-azy, talenta, tiavo ny tenanao
2 commentaires sur “Tiako ny tenako sy ny momba ahy rehetra”
Nataon’Andriamanitra mitovy endrika aminy isika olombelona, ka tsara daholo saingy samy hafa fotsiny. Izany no tokony itiavana ny tena.
Marina tokoa izany! Misaotra anao 🙂